वृद्धभत्ता बढ्छ,साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – Khabar Patrika Np
वृद्धभत्ता बढ्छ,साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र १८, २०७७ समय: ६:१५:५१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) बढ्ने घोषणा गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछु भन्दा कसैलाई आपत्ति लाग्न सक्ने बताए ।
‘केहीले भन्ने गरेका छन्, आधा–आधा थियो खै आधा–आधा ? भन्छन् । त्यो कागज बीचमै च्यातेर प्रचण्डले कार्यकारी चाहियो भनेको होइन ?’ उनले भने । यसै चैतमा महाधिवेशनको मिति तोकेर आफूले अध्यक्ष छाड्न खोज्दा पनि अहिल्यै चाहियो भनेर विवाद गरिएको ओलीले बताए ।
प्रचण्डले केटाकेटी जस्तो सूर्य चिह्नमा दाबी गर्दा छक्क परेको उनले बताए । ‘प्रचण्डले सूर्य चिह्न मेरो हो भन्दा छक्क परें,’ उनले भने । बुद्धिजीवीको मुख्य काम केपी ओलीलाई हटाउनु हो जस्तो भएको उनले बताए ।
‘मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो, किनकि केपी ओलीले देश विकास गर्न थालिसक्यो । विप्लवका समस्या समाधान गरिसक्यो । मेलम्चीको पानी आइसक्यो, छिटो हटाउनुपर्‍यो । यस्तो गर्न दिएर हुन्छ ? महन्थजी !’